SERASERA, TENY MALAGASY : RODOBE, TOLOM-BAHOAKA - rov@higa
SERASERA, TENY MALAGASY : RODOBE, TOLOM-BAHOAKA
19 Mai 2011, 22:47pm
NAFINDRAN' NY PREFET DE POLICE - ANTANANARIVO RENIVOTRA ENY @ KIANJAN'ALAROBIA INDRAY NY FOTOAM-PIVAVAHANA KARAKARAIN' NY HETSIKY NY MPITONDRA FIVAVAHANA (HMF) rahampitso Zoma 20 mai 2011.
Hanomboka @ 11 ora ny fotoana ary hifarana @ 1 ora atoandra io fotoana io hoy ny fanazavana avy @ tomponandraikitra.
Tongava marobe eny @ stade Alarobia rahampitso!
Rodoben'ny Malagasy : miha-mahery vaika isan'andro ny grenady asesika ny vahoaka (+vidéos)
Tratra ny tanjona hoan'ny hetsika androany na dia semban-drahona aza. Voatitra avokoa ireo taratasy rehetra fanehoana fitakiana ny hisian'ny rariny eto amin'ny firenena. Fitakiana telo sosona no noraiketina an-tsoratra ka naterina tamin'ireo tompon'andraikitra androany. Ny iray tao amin'ny biraon'ny filan-kevitry ny tetezamita an'ny FATE, ny faharoa natolotra ny mpitsara zokiolona sy ny "procureur de la République" teo amin'ny Lapan'ny Fitsarana Anosy ary ny fahatelo tao amin'ny RNM sy ny TVM.
Nandritra izany dian'ny delegasiona izany anefa dia "lacrymogène" no rivotra niainan'ny vahoaka tety ivelany. Nahatsikaiky ihany ny andiany voalohany tamin'ny "tsipoapoaka" satria ireo hery famoretana no nifandaroka vokatry ny fikoropahana saingy rehefa avy eo dia nataon'izy ireo hazalambo tamin'ny grenady mihitsy ireo mpitolona. Niverina tsikelikely anefa ny olona rehefa nahita ny Pr. Zafy tsy niala fa nijoro manolona ny fivarotam-boninkazo eo akaiky ny biraon'ny planina Anosy.
Rehefa nahita izany ireto hery famoretana dia nihodina manolona any hopitaly HJRA ary dia raikitra indray ny daroka vary raraka tamin'ny baomba mandatsa-dranomaso. Niparitaka noho izany ny vahoaka ka ny Pr. Zafy sy ny mpiara-dia aminy akaiky sisa nianjadian'ny setroka teo. Hita ho tsy nahazo aina mihitsy ity Filoham-pirenena teo aloha ity vokatry ny herin'ny entona.Mpitolona iray indray hatreto no fantatra fa voasambotry ny EMMoREG io hariva io.
Raha ny fahenoana azy tokoa dia toa hafa noho ny nampiasain'izy ireo omaly ny androany. Mandoro tarehy sady manempotra ilay androany ary ny ati-tenda avy hatrany no hamaininy. Maro tamin'ireo mpitolona no mivatsy vinaigitra iadiana amin'ity fitaovam-piadiana ity toy ny mahazatra saingy tsy nandaitra intsony izany androany. Raha ny hita androany dia maro ireo tsy nahazaka ny herin'izany grenady izany eny na dia mpandalo tsotra aza. Raha ny filazan'ny mpitazana dia nisy zaza iray nijoro manoloana ny HJRA no tsy nahatsiaro tena avy hatrany ka voatery nampidirina tao amin'ity hopitaly ity hovonjena. Nisy koa ireo nandalo tamin'ny fiara fitanteram-bahoaka no nianjadian'ny entona ka safotra tao anatiny fa ny tena henjana dia ity tanora iray nadeha moto teny amin'ny manodidina no voatifitry ny grenady teo amin'ny kibony. Marina fa tsy mahafaty izy ireny saingy nitaraina kosa ity ranamana fa tena maharary azy ilay faritra nipetahan'ilay grenady.
Tsy misy lanjan’ny amin’ny FATE i Madagasikara
Nahavariana ny nanatri-maso rehetra ny zava-nitranga teny Anosy omaly. Ankoatry ny famoretana nahazo ireo vahoaka mitaky ny rariny dia ny fiandrianam-pirenena mihitsy no ivaivain’ny FATE ary natao teo amin’ny tranom-panjakana ny fampisehoana izany. Nivadika ny sainam-pirenena nipetaka teo amin’ny lapan’ny Antenimieram-pirenena eo Anosy omaly izay iasan’ny CST FATE ankehitriny. Fotsy, Mena , Maintso ny filahatry ny lokon’ny sainam-pirenenatsika saingy ny maintso indray no lasa ambony teo amin’izany tranom-panjakana izany omaly.
Mazava hoazy fa taratry ny famingavingana ataon’ny mpanongam-panjakana amin’ny Tanindrazana iombonana izany. Mieritreritra ny vahoaka Malagasy ho mivadik’ondana daholo izy ireo ka sahy mamerina an-tanan’ny mpanjaka ny Firenena amin’ny fomba rehetra. Saron-tava sisa manko ny varo-mora fa efa tena omem-pontsiny an’izay manampy ny FATE rehetra I Madagasikara ankehitriny. Ny fivadihan’ny sainam-pirenena ihany koa dia tokony hampahatsiahy amin’ny “tandroka aron’ny vozona” fa ataon’I TGV sy ny ekipany mpiaro ny tombontsoany manokana izy ireo fa tsy avelany hijoro ho “mandatehezana” hoan’ny Repoblika.
Ny tsy mety efa mivandravandra fa ny fahatongavan-tsain’ny tsirairay no andrasana. Ny andraikitra amin’ny fanavotana ny firenena tsy iandrasana olon-kafa fa ny Malagasy no tompony. Ny Rodoben’ny Vahoaka Malagasy dia sehatra iray itambaran’ny hery rehetra eto amin’ny Firenena izay mahatsapa fa efa tapitra ny alanenina azo atao amin’ny FATE. Ny tsirairay no afaka manamafy izany ka manampy amin’ny fitakiana ny fiverenan’ny rariny sy ny ara-dalàna eto Madagasikara. Tsy zana-tany intsony akory Madagasikara ka hiforitra lava hiandry toloram-potsiny fa Olombelona tonga saina afaka misafidy ny lalana itondrany ny hoaviny ny Malagasy.
Alao hery ary ry vahoaka Malagasy fa miandry anao ny Firenena.
Mitsangana fa aza manana ahiahy …
Sahia andao hiara-dia …
Rodoben’ny malagasy ho an’ny tanindrazana: Roso ‘ty, tsa mipody koa!
Tsy hitsahatra intsony ny hetsiky ny rodoben’ny malagasy ho an’ny tanindrazana hoy Rakotoamboa Jean Louis, anisan’ny mpitarika ireo mpanao rodobe omaly teny Anosy. Tokony ho tamin’ny 12ora sy 30mn teo no nanomboka nitangorongorona ny vahoaka notarihan’izy ireo, ary minitra vitsy taorian’izay dia vory marobe ny olona ary niainga teo koa ny baomba lakrimozena. Tsy nihemotra ny mpitolona izay saika ny ekipa mpiaraka amin’i Zafy Albert no tena betsaka. Ny profesora Zafy rahateo no nidina teny an-toerana nitarika ireo vahoaka. Nipetraka ny fanontaniana hoe nahoana no teny Anosy no nanaovana ny hetsika ? Novalian’ireo mpitari-tolona fa hanatitra taratasy ao amin’ny fitsarana izy ireo mangataka ny hamoahana ireo gadra politika, sady mikasa ho ao amin’ny RNM sy TVM ahafahan’ny rehetra mandray fitenenana ao...
Mieritreritra handrava ny CST koa ry zareo izay heveriny fa ao no misy ny jiolahy politika mandripaka sy manao tantely afadrakotra ny harem-pirenena. Naharitra ora iray mahery teo ny fifampihantsiana ka nampidonan-tsetroka ny teo Anosy omaly. Noho izay dia voatery nampitsahatra ny filaharana ny mpitarika, saingy nanentana kosa fa tsy hijanona intsony ny tolony fa hitohy anio amin’ny 10 ora maraina ary hanatanteraka ireo fandaharam-potoana voalaza etsy ambony. Hatreto aloha dia nirava maina ny tolona ary tsy nisy koa ny naratra omaly na dia teo aza ny fifanosehana sy ny baomba mandatsa-dranomaso. Fantatra kosa fa olona telo no voasambotry ny mpitandro filaminana. Ny mpitandro filaminana etsy andaniny dia nanambara fa tsy hihemotra fa tsy maintsy miaro ny ain’ny vahoaka sy ny fananam-panjakana izay mety ho potika amin’ny hetsika tahaka izao. Maromaro ny hetsika fitakiana niseho tato ho ato izay miantefa any amin’ny mpitondra fanjakana avokoa. Eo ny teny Ankatso, ity koa fa mitady hahazo vahana ny mpanohitra, ary manginy fotsiny ireo fanamparam-pahefana ataon’ny mpiara-dia amin’ny tetezamita, toa vao mainka mandrehitra ny afo indray.